Halyeyga reer Iran ee Ali Daei oo ka hadlay haddii Cristiano Ronaldo uu gaari karo rikoorkiisa gooldhalineed ee heerka caalami – Gool FM
Halyeyga reer Iran ee Ali Daei oo ka hadlay haddii Cristiano Ronaldo uu gaari karo rikoorkiisa gooldhalineed ee heerka caalami
(Yurub) 17 Nof 2020. Halyeyga reer Iran ee Ali Daei ayaa shaaca ka qaaday haddii Cristiano Ronaldo uu gaari karo rikoorkiisa gooldhalineed ee heerka caalami.
Ali Daei waxa uu sheegay inuu si daacad ah u rajaynayo in Cristiano Ronaldo uu jabin doono rikoorkiisa goolasha heer qaran.
Xaqiiqdii Cristiano Ronaldo ayaa ku dhow inuu soo barbareeyo rikoorka 109 gool ee uu heerka qaran uu dhaliyey Ali Daei.
Halyeeyga reer Iran ayaa si diirran ugu hambalyeyn doona xiddiga reer Portugal haddii uu dhaafo rikoorkiisa gooldhalineed ee cajiibka ah.
Daei oo haatan 51-sano jir ah ayaa shabaqa taabsiiyey 109 gool 149 kulan oo uu u saftay xulka qaranka Iran intii u dhexeysay 1993 iyo 2006, laakiin Ronaldo ayaa aad ugu dhow inuu rikoorkaas gooldhalineed kala wareego isagoo dhaliyey 102 gool 169 kulan oo uu u saftay xulka qaranka Portugal.
Weeraryahanka Kooxda Juventus oo haatan 35-sano jir ah ayaa fursad u haysta inuu goolashadiisa sare u qaado marka uu xulkiisa qaranka Portugal la ciyaarayo Croatia talaadada habeenkeeda kulan qeyb ka ah tartanka UEFA Nations League.
Tartanka Euro 2020 iyo sidoo kale kulammada isreeb-reebka Koobka Adduunka ee 2022 ayaa Ronaldo la filayaa inuu goolal ku daro goolashiisa qaranka.
Daei waa uu ku faraxsanaan lahaa inuu arko inay taasi dhacdo, isagoo u sheegaya Wargeyska Portugal ka soo baxa ee Record: “Waxaan si dhab ah u rajeynayaa in Cristiano Ronaldo uu gaari doono rikoorkeyga gooldhalinta xulka.
“Sinaba ima dhaawaceyso, sharaf ayey ii noqon lahayd aniga haddii ciyaaryahan fasalkiisa ah uu sameyn karo.
“Cristiano Ronaldo waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican ma’ahan kaliya waqtigiisa, laakiin waqtiga oo dhan, isagu waa dhacdo buuxda.
“Si toos ah ayaan ugu hambalyeyn lahaa, laakiin marka hore waa inuu halkaas gaaro.”
“Cristiano wuxuu horey u heystay 102 gool oo xulkiisa Portugal ah, wuuna jabin doonaa rikoorkeyga, waan hubaa taas, laakiin wali waxaa u harsan 7 gool.”
Xiddig ka tirsan Kooxda Barcelona oo uga mahadceliyey Real Madrid inaysan la saxiixan isaga!